Home News Khilaafka Madaxtoyada oo Si Xumanaya&Musharadka Ciidamada Qalabka Sida oo La Lunsaday
Waxa weli xiisad ay ka taagan tahay maamulka sare ee madaxtoyada soomaaliya iyado weli ay warar kala duwan ka so baxayaan.
Waxyaabaha la isku hayo aya ah arrimo la xiriira dhanka ciidamada iyado la dhunsaday mushaaradka ciidamada qalabka sida.
Wararka aynu heleyno aya shegaya in ciidamada xoogga dalka aysan mushaar helin bilooyinki u danbeyay musharadki ay ku lahayen dowladda, waxaana taasi ay keentay in khilaafka uu si kordho.
Wararka ayaa sidoo kale waxay sheegeysaa in Farmaajo uu ku amray Xasan Cali Kheyre in sida ugu dhaqsiyaha badan uu ku bixiyo mushaarka ciidamada xoogga dalka, haddii kale arrinta mel xun gaari doonto.
Maanta aya lagu wada in kulan deg deg ah ay yeeshaan golaha wasiirada xukuumada iyadona arimo badan loga hadli doono taasi oo ugu waaweyn xirnaanshiyaha suuqa bakaaraha,iyo mushaar la anta ciidamada qalabka sida.
Walow Bilowgii bishan ay Muqdisho.Online ay shacisay in ciidamda xooga dalka aysan wax mushaar ah helen oo mushaaradkoodi la lunsaday iyado xitaa gonoyinka ay ka hele jireen xafiska madaxweynaha iyo Raisul wasaaraha la joojiyeey oo xili hore ugu danbeysay.
Dhibaatoyin badan aya heysta ciidamada qalabka sida,iyago ay qarkood ay ino shegen in ay deganada ay la waregan misane ay ka baxan ay sabab u tahay ciidamada oo anan heysan wax saanad ah oo ay ku howlgalaan.